international – OOTDMYANMAR
No Comments on HOW RICH ARE THE MEMBERS OF BLACKPINK?
BLACKPINK အဖွဲ့ဝင်တွေ ဘယ်လောက်ချမ်းသာလဲ?
BLACKPINK has comealong way since they launched in 2016. Within four years, this phenomenal K-pop girl group has sold-out concerts, millions of albums sold, billions of YouTube views, andacountless international brand endorsements.
BLACKPINK အဖွဲ့ကို ၂၀၁၆ ခုနှစ် ကတည်းက စတင်လာခဲ့တာ အခုဆိုအချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုထိ ရောက်ရှိခဲ့ပါပြီ။ လေးနှစ်တာကာလအတွင်း BLACKPINK girl group က ရှိုးပွဲလက်မှတ်တွေ၊ အယ်လ်မ်တွေ သိန်းချီရောင်းချနိုင်ခဲ့ပြီး YouTube မှာလည်း သန်းနဲ့ချီတဲ့ကြည့်ရှုသူတွေအပြင် မရေတွက်နိုင်တဲ့ နိုင်ငံတကာက နာမည်ကြီးအမှတ်တံဆိပ်တွေနဲ့လည်း လက်တွဲလုပ်ကိုင်ခဲ့ပါတယ်။
Photo credits @blackpink
If you’ve seen their Netflix documentary Light Up The Sky, you will see that achieving these milestones was not easy for them. It came with years of hardwork. Tough trainings, homesickness, and the uncertain future. Still, they remained passionate and positive in pursuing their dreams, and are now reaping their well-deserved success.
Netflix မှာ ပြသခဲ့တဲ့ သူတို့အဖွဲ့ရဲ့ Light Up The Sky ဆိုတဲ့ documentaryကို ကြည့်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ အဖွဲ့ဝင်တွေအားလုံးဟာ အောင်မြင်မှုတွေကို လွယ်လွယ်နဲ့ရခဲ့တာမဟုတ်ကြောင်း မြင်တွေ့ရမှာပါ။ အခုအခြေအနေကိုရောက်ဖို့ နှစ်ပေါင်းများစွာ ကြိုးစားရုန်းကန်ခဲ့ကြရတာပါ။ ပြင်းထန်တဲ့ လေ့ကျင့်မှုတွေ၊ အိမ်ကိုလွမ်းတဲ့ဝေဒနာတွေ၊ မသေချာတဲ့ အနာဂါတ်တွေကိုလည်း ရင်ဆိုင်ခဲ့ရပါသေးတယ်။ ဒါပေမယ့် အဖွဲ့ဝင်တွေအားလုံးက သူတို့ရဲ့အိမ်မက်ကို လက်တွေ့အကောင်အထည်ဖော်ဖို့ စိတ်ဆန္ဒပြင်းပြပြီး ကောင်းတဲ့အတွေးအမြင်တွေနဲ့ ရှေ့ဆက်ခဲ့တာကြောင့် ထိုက်တန်တဲ့ အောင်မြင်မှုကို ရရှိခဲ့တာပါ။
PS BLACKPINK’s net worth is reported to beawhopping $32 million this year.
PS BLACKPINK ရဲ့ ငွေကြေးပိုင်ဆိုင်မှုက ဒီနှစ်မှာ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၃၂ မီလီယံ အထိရှိတယ်လို့ ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။
Tags blackpink, blink, ootdmyanmar
MINZY JUST LAUNCHED HER OWN ENTERTAINMENT AGENCY,MZ ENTERTAINMENT
No Comments on MINZY JUST LAUNCHED HER OWN ENTERTAINMENT AGENCY,MZ ENTERTAINMENT
ကိုယ်ပိုင် MZ Entertainment ကုမ္ပဏီထူထောင်လိုက်တဲ့ Minzy
In 2016, the K-pop idol left YG Entertainment and went on to beasolo artist under The Music Works agency. Three years later, she took legal action against the said agency after her request for the suspension of her exclusive contract was denied. In April this year, Minzy officially separated from The Music Works.
오늘 1부 팬미팅 와준 우리 팬들 너무 고맙구 사랑해❤️예쁜 풍선보내준 해외팬들 사랑해여❤️ Thanks for coming my fan meeting 😢 Love you guys so so much! Muah💄💋💜 #bestgiftever @pgnpictures
A post shared by MINZY (@_minzy_mz) on Nov 1, 2020 at 1:42am PST
၂၀၁၆ ခုနှစ်မှာ K-pop idol Minzy က YG Entertainment ကနေ ထွက်ခွာခဲ့ပြီး Music Works agency အောက်မှာ တစ်ကိုယ်တော်လှုပ်ရှားမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ သုံးနှစ်ကြာပြီးတဲ့နောက် သူမရဲ့ စာချုပ်သက်တမ်း ဆိုင်းငံ့ပေးဖို့တောင်းဆိုမှုကို ပယ်ချခဲ့တဲ့အတွက် အေဂျင်စီ ကို တရားဝင်အရေးယူမှုပြုလုပ်ခဲ့ပြီး ဒီနှစ် ဧပြီလမှာတော့ Minzy က The Music Works နဲ့ တရားဝင်လမ်းခွဲခဲ့ပါတယ်။
According to Soompi, the “Superwoman” singer has established MZ Entertainment with management specialist Gong Soon Yong, who will act as the agency’s CEO. The two will lead the company in buildingapool of talents, backed by Minzy’s 11 years of experience in the K-pop industry and Soon Yong’s 30 years of experience in the field of business. It is said that MZ entertainment will function asadance school withaspecialized training system.
Soompi ရဲ့ ဖော်ပြချက်အရ “Superwoman” အဆိုတော် မင်ဇီ က MZ Entertainment ကို စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး စီမံခန့်ခွဲမှုပညာရှင် Gong Soon Yong က အေဂျင်စီ ရဲ့ စီအီးအို အဖြစ် တာဝန်ယူဆောင်ရွက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနှစ်ဦး က ကုမ္ပဏီကို အဓိက ဦးဆောင်သွားမှာဖြစ်ပြီး Minzy ရဲ့ K-Pop လောက ၁၁ နှစ်တာ အတွေ့အကြုံတွေနဲ့ Soon Yong ရဲ့ နှစ်သုံးဆယ်ကြာ စီမံခန့်ခွဲမှု အတွေ့အကြုံတွေကို ပေါင်းစပ်ပြီး အနုပညာရှင်တွေကို ပျိုးထောင် မွေးထုတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ MZ entertainment အနေနဲ့ အထူးလေ့ကျင်မှုတွေပါဝင်တဲ့ အကသင်တန်းကျောင်းအဖြစ် ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့လည်း ဆိုပါတယ်။
The name MZ Entertainment is derived from the company’s goal to mold K-pop stars from the “millennium Z” generation. It aims to cultivate their potential and personalities, and support their future endeavors as artists. Minzy will also be under this agency while she promotes her solo activities.
ကုမ္ပဏီရဲ့ ရည်မှန်းချက်ဖြစ်တဲ့ “millennium Z” မျိုးဆက် က K-pop ကြယ်ပွင့်တွေကို မွေးထုတ်ပေးဖို့ အတွက် MZ Entertainment ဆိုတဲ့အမည်ကိုသတ်မှတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ လုပ်နိုင်စွမ်းတွေ၊ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးတွေကို ပြင်ဆင်ပျိုးထောင်ပေးဖို့၊ အနုပညာရှင်တစ်ယောက်အဖြစ် ရပ်တည်ချင်တဲ့သူတို့ရဲ့အနာဂါတ်တွေကို ကူညီထောက်ပံ့ပေးဖို့ အဓိကရည်ရွယ်ပါတယ်။ Minzy ကိုယ်တိုင်ကလည်း သူမရဲ့ တစ်ကိုယ်တော်လှုပ်ရှားမှုတွေကို သူမရဲ့အေဂျင်စီလက်အောက်မှာပဲ ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
Minzy has recently appeared inatalk show with her fellow 2NE1 member, Sandara Park. She released her comeback single “Lovely” earlier this year, which she wrote asamessage to herself and her fans.
Minzy က မကြာသေးခင် က 2NE1 ရဲ့ အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ Sandara Park နဲ့ talk show တစ်ခုမှာ ပါဝင်ခဲ့ပါသေးတယ်။ သူမရဲ့ comeback single ဖြစ်တဲ့ “Lovely” ကို ဒီနှစ်ရဲ့အစောပိုင်းမှာ ဖြန့်ချိခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီသီချင်းကတော့ သူမ နဲ့ သူမရဲ့ချစ်ပရိတ်သတ်တွေကို message လေးပေးပို့ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။
Article translated from cosmo.ph
cosmo.ph မှ ဆောင်းပါးကို ဘာသာပြန်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
Tags KPOP, MINTZY, ootdmyanmar
“EMILY IN PARIS” ACTORS YOU NEED TO FOLLOW ON INSTAGRAM
No Comments on “EMILY IN PARIS” ACTORS YOU NEED TO FOLLOW ON INSTAGRAM
If you can’t get enough of Emily in Paris after enjoying the series with beautiful sights in Paris, workplace drama, gorgeous outfits, and even more beautiful mixture of Asian, American, and French Actors. Stalking and getting curious to know more about the casts? Check out their Instagram accounts. Don’t forget that “follow” button.
Instagram မှာ follow လုပ်ထားသင့်တဲ့ “Emily in Paris” ဇာတ်လမ်းတွဲရဲ့ သရုပ်ဆောင်များ
ပါရီမြို့ရဲ့လှပတဲ့ရှုခင်းတွေ၊ မှင်သက်စရာကောင်းတဲ့ဝတ်စုံတွေနဲ့ လုပ်ငန်းခွင်တွင်းမှာ ကြုံတွေ့ရတဲ့အကြောင်းတွေကို အာရှ၊ အမေရိကား နဲ့ ပြင်သစ် သရုပ်ဆောင်တွေပါဝင်ရိုက်ကူးထားတဲ့ Emily in Paris ဇာတ်လမ်းတွဲကို ကြည့်ရှုပြီး ဇာတ်လမ်းပြီးသွားချိန်မှာ အားမလိုအားမရဖြစ်နေပြီလား။ ဇာတ်လမ်းထဲမှာ ပါဝင်တဲ့သရုပ်ဆောင်တွေရဲ့အကြောင်းကို ပိုသိရအောင် ရှာရှာဖွေဖွေစပ်စုကြည့်ကြရင်မကောင်းဘူးလား။ သူတို့ရဲ့ Instagram account တွေကို ကြည့်ကြည့်ပါဦး။ follow လုပ်ဖို့လည်းမမေ့နဲ့နော်။
1. Lily Collins as Emily
Instagram account: @lilyjcollins
2. Ashley Park as Mindy
la vie en 🌹 ••@harpersbazaarus•• . So loved talking to @angcutt at #harpersbazaar about ‘finding my tribe’ along the way…
A post shared by •• Ashley Park •• (@ashleyparklady) on Oct 14, 2020 at 9:55am PDT
Instagram account: @ashleyparklady
3.Lucas Bravo as Gabriel
Instagram account: @lucasnbravo
Hello world, thank you so much for your love and support, it meansalot to me. I wish you the best, take care of yourselves. And see you in season2! (Soon i hope). 🍾 👄 ❤️ @emilyinparis
A post shared by Camille Razat (@camillerazat) on Oct 4, 2020 at 11:37pm PDT
Instagram account: @camillerazat
5Philippine Leroy Beaulieu as Sylvie
« What were you doing with MAT last night, Emily? » #sylvie #emilyinparis @lilyjcollins @emilyinparis @netflix @netflixfr
A post shared by Philippine Leroy Beaulieu (@philippineleroybeaulieu) on Oct 14, 2020 at 7:26am PDT
Instagram account: @philippineleroybeaulieu
6.Bruno Gouery as Luc
A chacun sa méthode… pour écrire, apprendre, se laver, jouer, prier, s’apaiser, réver… #brunogouery #theatre #piecedetheatre #ecriture
A post shared by Bruno Gouery (@brunogouery) on Sep 28, 2020 at 5:19am PDT
Instagram account: @brunogouery
7. William Abadie as Antoine
Photo credit: @tara_westwood 🙏 🙌
Instagram account: @william_abadie
Tags emilyinparis, netflix, ootdmyanmar, show
ZAYN MALIK & GIGI HADID WELCOMES THEIR BABY GIRL
No Comments on ZAYN MALIK & GIGI HADID WELCOMES THEIR BABY GIRL
သမီးဦးလေးကို ကြိုဆိုလိုက်တဲ့ Zayn Malik နဲ့ Gigi Hadid
Gigi Hadid and Zayn Malik finally enter the parents club! Gigi Hadid just gave birth toahealthy baby girl!
Gigi Hadid နဲ့ Zayn Malik တို့နှစ်ယောက် နောက်ဆုံးတော့ မိဘတွေဖြစ်လာကြပါပြီ။ Gigi Hadid က ကျန်းမာသန်စွမ်းတဲ့ သမီးဦးလေးကို ဖွားမြင်ခဲ့ပါတယ်။
The proud dad took Twitter to announce the big news, together withatouching black-and-white photo showing him holding his baby girl’s little hand.
ဖခင်ဖြစ်သူက ဂုဏ်ယူဝင့်ကြွားစွာနဲ့ သမီးလေးနဲ့ လက်ချင်းဆုပ်ကိုင်ထားတဲ့ အဖြူအမည်းဓာတ်ပုံလေးကို twitter မှာ တင်ခဲ့ပါတယ်။
“Our baby girl is here, healthy, and beautiful,”
“ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ကျန်းမာသန်စွမ်းပြီး လှပတဲ့သမီးရတနာလေးပါ”
“To try put into words how I am feeling right now would be an impossible task. The love I feel for this tiny human is beyond my understanding. Grateful to know her, proud to call her mine, and thankful for the life we will have together.”
“ကျွန်တော်အခုဘယ်လိုခံစားနေရလဲဆိုတာကို စကားလုံးတွေနဲ့ဖော်ပြဖို့တောင်မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ ဒီလူသားလေးအပေါ်ခံစားရတဲ့ ကျွန်တော့်ရဲ့အချစ်က နားလည်နိုင်တာထက်ပိုပါတယ်။ သူ့ကိုသိခွင့်ရလို့ ဝမ်းသာမိတယ်၊ သူ့ကို ကျွန်တော့်သမီးလေးလို့ပြောခွင့်ရတဲ့အတွက် ဂုဏ်ယူမိတယ်၊ ကျွန်တော်တို့အတူရှေ့ဆက်ရမယ့်ဘဝအတွက်လည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။” လို့ Zayn က Twitter မှာ တင်ခဲ့ပါတယ်။
Our baby girl is here, healthy & beautiful🙏🏽❤️to try put into words how i am feeling right now would be an impossib… twitter.com/i/web/status/1…—
zayn (@zaynmalik) September 24, 2020
Shortly after Gigi took to social media to introduce their daughter to the world:
သိပ်မကြာခင်မှာပဲ Gigi ကလည်း ဆိုရှယ်မီဒီယာကတဆင့် ကမ္ဘာကြီးကို သူမရဲ့သမီးလေးနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးခဲ့ပါသေးတယ်။
“Our girl joined us earth-side this weekend and she’s already changed our world. So in love,” she said in her Instagram post, which also showsablack-and-white photo of her and her precious child locking hands.
“ကျွန်မတို့ရဲ့သမီးလေး ကမ္ဘာမြေပေါ်ရောက်ရှိလာပါပြီ။ သူလေးက ကျွန်မတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ကမ္ဘာကို ပြောင်းလဲပေးလိုက်ပါပြီ။ အရမ်းချစ်မိတယ်” လို့ သူမရဲ့ instagram post မှာ သားအမိနှစ်ယောက် လက်ချင်းဆုပ်ကိုင်ထားတဲ့ အဖြူအမည်းဓာတ်ပုံလေးနဲ့အတူ ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။
Gigi နဲ့ Zayn တို့ ပြန်လည်သင့်မြတ်သွားတဲ့အကြောင်း ဧပြီလမှာ သတင်းတွေထွက်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။ သူမရဲ့ ၂၅ နှစ်ပြည့်မွေးနေ့ကို ဆင်နွှဲချိန်မှာတော့ သူမရဲ့ကိုယ်ဝန်က ရက်သတ္တပတ် ၂၀ ခန့်ရှိနေပါပြီ။
Gigi revealed her baby bump for the first time in July.
Gigi က သူမရဲ့လှပကျော့ရှင်းတဲ့ဗိုက်ကို ဇူလိုင်လမှာ ပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ် အားလုံးကိုအသိပေးခဲ့ပါတယ်။
Congratulations, Zayn and Gigi! We can’t wait to see more photos of your beautiful blessing!
ဂုဏ်ယူပါတယ် Zayn နဲ့ Gigi ရေ! ချစ်စရာကောင်းတဲ့ သမီးလေးရဲ့ဓာတ်ပုံတွေကိုမြင်ရဖို့ မစောင့်နိုင်တော့ပါဘူး။
Written & Translated by Yaminn Phyo Wai
Tags gigihadid, ootdmyanmar, zaynmalik